Polisy manararao-pahefana any amin’ny faritra Tokony hodinihina eny amin’ny parlemanta, hoy ny SMM
Mitaraina amin’ny fanararaom-pahefana ataon’ny polisy, indrindra fa any amin’ny faritra ireo olona nametraka fitarainana fa diso tafahoatra loatra ny fanararaotana fahefana ataon’izy ireo.
Ny any amin’ny faritra Betsiboka, Sofia ary Atsimo andrefana no tena hanjakan’ny fanararaotana, hoy ny vaovao. Nambaran’ny filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara na SMM, Atoa Clément Jaona fa maro ireo fitarainana momba izany tonga eny amin’ny fiadidiana ny Repoblika, saingy, tsy ahazoan’ireo mitaraina valiny mahafa-po. Tsy any amin’ny faritra ihany fa ny eto an-drenivohitra koa, hoy ny fanazavany. Nilaza ny filohan’ity sendikan’ny mpitsara ity, fa tokony halefa hodinihan’ny parlemantera eny anivon’ny antenimieram-pirenena, ny momba ireo fitarainana sy ny fanararaotam-pahefana ataon’ny polisy ireo ary jerena koa ireo sazy mifandraika amin’izany. Farany, tsy tokony halefa eny amin’ny fiadidiana ny Repoblika intsony ny fitarainana fa any fiadidian’ny primatiora, hoy ny fanazavany.